Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » 2021 Global Destination Index navoaka
Global DMC Partners, tambajotra iraisam-pirenena lehibe indrindra an'ny orinasa tsy miankina Destination Management (DMC) sy mpanome tolotra hetsika manokana, dia namoaka ny 2021 Global Destination Index, manasongadina ny toerana fivoriana sy fandrisihana malaza indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny 2021, ary hamantatra ireo tsena efa misy. fironana ho an'ny 2022. Ny tatitra dia nangonina mifototra amin'ny famakafakana ny valin-tenin'ny planner avy amin'ny GDP Q3 Meeting & Events Pulse Survey ary nandinika fivoriana efa ho 1,600 sy mandrisika RFP any amin'ny toerana 500 mahery izay asehon'ny Global DMC Partners.
Top Destinations any Etazonia
Toerana iraisam-pirenena ambony
(Angletera & Ekosy) 2. Italia
3. Espaina 3. Frantsa
4. Alemaina 4. Espaina
5. Italy, Danemark, France (tie) 5. Bahamas
"Na dia zava-dehibe ho antsika aza ny mijery an'io data io isan-taona, amin'ity taona ity dia tena zava-dehibe izany. Mipoitra avy amin'ny fotoan-tsarotra faran'izay sarotra amin'ny fanakatonana ny areti-mifindra ireo mpiara-miombon'antoka aminay sy mpanjifanay eran'izao tontolo izao ary te-hahafantatra hoe tsena inona no tsy azo antoka fotsiny fa vonona ho an'ny vondrona mba hahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny drafitra ho avy, ”hoy ny Filoha Global DMC Partners sy CEO Catherine Chaulet. "Satria misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toekarena manerantany ny indostrianay amin'ny fampivondronana olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao isan'andro, mahatsapa izahay fa manana andraikitra hikaroka, hamakafaka ary hizara izany fampahalalana manan-danja izany."
Notohizan'i Chalet hoe: "Raha jerena ny valin'ny Q3 Meeting & Events Pulse Survey, dia nasehon'izy ireo mazava tsara fa tamin'ny taona 2021, dia nijanona teo amin'ny faritra ho an'ny fandaharan'asany ireo mpandrindra any Eropa. Toy izany koa ny amin'ireo mpanjifa amerikana izay nivory tao Etazonia, na tany Meksika sy Karaiba. Raha jerena anefa ireo faritra mahaliana amin’ny taona 2022 dia hita fa tena manomboka mijery any ivelan’ny faritra misy azy ny mpanentana amin’ny fivoriana sy hetsika. Famantarana lehibe izany fa manomboka miverina indray ny fandraharahana, ary lasa mora idirana indray izao tontolo izao. ”
Ho an'ny mpanjifa monina any Etazonia, ny faritra rehetra ivelan'i Etazonia dia lasa malaza amin'ny taona 2022, indrindra fa i Eoropa sy Meksika no mitarika ny lalana. Ho an'ny mpanjifa Eoropeana, ny faritra rehetra ivelan'i Eoropa dia mahita fitomboan'ny laza, tarihin'i Etazonia sy Kanada, arahin'ny Afovoany Atsinanana sy Meksika.